TSY ANISAN'NY TAMBAZOTRA NY ORANA - ORIGIN - 2019
Ny fiavahana dia tsy mahita ny fifandraisana aterineto
Ny ankamaroan'ny lalao amin'ny orinasa Electronic Arts dia miasa raha tsy manomboka amin'ny alalan'ny orinasa orinasa. Mba hampidirana voalohany ny fangatahana dia mila mifandray amin'ny tambajotra ianao (dia azo atao ny miasa ivelan'ny aterineto). Saingy indraindray dia misy ny toe-draharaha misy rehefa mifandray sy miasa tsara, saingy mbola mitatitra ny "Origin" ianao.
Tsy anisan'ny tambazotra ny orana
Misy antony maromaro mety hitranga amin'io olana io. Mihevitra ny fomba malaza indrindra hiverina amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa izahay. Ireto fomba manaraka ireto dia mahomby raha tsy manana fifandraisana Internet miasa ianao ary afaka mampiasa izany amin'ny sehatra hafa.
Fomba 1: Esory ny TCP / IP
Ity fomba ity dia afaka manampy ireo mpampiasa izay nametraka ny Windows Vista sy ny dikan-teny vaovao amin'ny OS. Ity dia olana efa antitra efa ela teo aloha izay tsy mbola voafaritra - ny mpanjifa dia tsy mahita ny tambajotra TCP / IP version 6. Jereo ny fomba hamafana IPv6:
Voalohany dia mila mankany amin'ny tonian'ny lisitra ianao. Mba hanaovana izany, tsindrio ny sombin-kiheba Win + R ary ao amin'ny fifanakalozan-kevitra izay misokatra, midira regedit. Tsindrio ny bokotra Ampidiro eo amin'ny bokotra na bokotra "OK".
Avy eo dia araho ity lalana manaraka ity:
Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services Tcpip6 Parameters
Azonao atao ny manokatra ny sampana manontolo na manapakevitra ny lalana ary mametaka izany ao anaty saha manokana eny an-tampon'ny varavarankely.
Eto dia ho hitanao ny mari-pamantarana iray DisabledComponents. Tsindrio eo amin'ny bokotra ankavanana ary mifidiana "Change".
Raha toa ka tsy misy fepetra tahaka izany dia azonao atao ny mamorona azy. Tsindrio eo ankavanana amin'ny faran'ny varavarankely ary tsinjovy ny tsipika "Mamorona" -> "DWORD Parameter".
Ampidiro ny anarana etsy ambony, raha jerena ny trangan'ny taratasy.
Amboary ny lanjany vaovao - FF Hexadecimal na 255 in decimal. Avy eo tsindrio "OK" ary atsangano ny solosainao ho an'ny fanovana natao.
Andramo izao dia miverena any amin'ny orinasa. Raha tsy misy fifandraisana, midira amin'ny fomba manaraka.
Fomba 2: Aza avela hifandray amin'ny olon-kafa
Azo atao koa ny manandrana mampifandray amin'ny iray amin'ireo malaza, fa ankehitriny ny fifandraisana amin'ny Internet. Manitsy izany amin'ny alàlan'ny fanesorana tambajotra fanampiny:
Voalohany aloha "Control Panel" na aiza na aiza fantatrao (safidy manerantany ho an'ny Windows rehetra - antsoinay ny boaty dialogue Win + R ary midira ao fanaraha-maso. Avy eo tsindrio "OK").
Hitady fizarana iray "Network and Internet" ary tsindrio eo.
Ary tsindrio eo amin'ny singa "Ivontoeran'ny tranonkala sy ny serasera".
Eto dia tsindrio amin'ny rindran-damosinao amin'ny ankavanana rehetra ny fifandraisana tsy miasa.
Miezaha hiditra ny orinasa indray. Raha tsy nisy ny zava-nitranga - mandrosoa.
Fomba 3: avereno ny Directory Winsock
Misy antony hafa koa mifandraika amin'ny TCP / IP sy Winsock. Noho ny fandidiana ireo programa maloto, ny fametrahana ireo mpamily karatra amin'ny ordinatera sy ireo zavatra hafa, dia mety hivoaka ny votoatin'ny protocol. Amin'ity tranga ity, mila mamerina ny votoatin'ny fitsipika fototra ianao:
Start "Lalana baiko" amin'ny anaran'ilay mpitantana (azonao atao izany "Diniho"amin'ny tsindrio manaraka PKM amin'ny fampiharana ary mifantina ny singa mety).
Ampidiro izao manaraka izao:
ary tsindrio Ampidiro amin'ny klavier. Hahita izao manaraka izao ianao:
Farany, atsangano indray ny ordinateranao mba hamaranana ny dingana resetsy.
Fomba 4: Fikirakira ny SSL Protocol fanalana
Ny antony iray hafa mety dia ny fanivanana ny protocols SSL dia alefa amin'ny virus anti-virus. Azonao atao ny mamaha ity olana ity amin'ny alàlan'ny fanesorana ny Antivirus, ny fanivanana sivana, na ny fametrahana mari-pamantarana. EA.com in exceptions. Ho an'ny Antivirus tsirairay, ity dingana ity dia olona tsirairay, noho izany dia manoro hevitra ny mamaky ny lahatsoratra amin'ny rohy eto ambany.
Vakio bebe kokoa: Ampidiro ireo zava-mitranga amin'ny fisorohana ny Antivirus
Fomba 5: Manomana tompon'andraikitra
Ny mpampiantrano dia rakitra fitahirizan-draharahan'ny fandaharana maro samihafa. Ny tanjony dia ny mandefa adiresy manokana manokana amin'ny adiresy manokana amin'ny tranokala. Ny vokatry ny fanelingelenana ity rakitra ity dia mety hanakana ny tranonkala sy ny serivisy sasany. Diniho ny fomba hanadiovana ilay tompona:
Mandehana amin'ilay lalana voatondro, na miditra ao amin'ny mpikaroka:
Hitady ny rakitra Tompon'ny maro, ary manokatra izany amin'ny editor-tsoratra rehetra (na ny mahazatra "Kahie").
Mety tsy hahita ity antontan-taratasy ity ianao raha toa ka nanala ny endrik'ireo zavatra miafina ianao. Ny lahatsoratra etsy ambany dia mamaritra ny fomba fampandraisana anjara azy:
Lesona: Ahoana no hanokafana ny takelaka miafina
Farany, esory ny ao anatin'ilay rakitra rehetra ary ampidiro ao amin'ny lahatsoratra manaraka, izay matetika ny default:
# Ity misy rakitra HOSTS ohatra ampiasain'ny Microsoft TCP / IP an'ny Windows.
# Ity rakitra ity dia misy adiresy IP ahafahana mamorona anarana. tsirairay
Tokony halefa ny laharana # Ny adiresy IP dia tokony
# hapetraka ao amin'ny tsanganana voalohany arahin'ny anaran'ny mpampiantrano mifanaraka aminy.
# Ny adiresy IP dia tokony ho farafaharatsiny
# Fanampin'izany, mety misy ny fanehoan-kevitra (toy ny hoe) ho an'ny tsirairay
Lalana #, na manaraka ny anaran'ilay milina marika miaraka amin'ny marika '#'.
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # mpandrindra loharano
# 38.25.63.10 x.acme.com # hosts mpampiantrano mpanjifa
Ny famaha name localhost dia ny DNS DNS manitsy azy.
Ireo fomba etsy ambony ireo dia manampy amin'ny famerenana ny fiandohan'ny asa amin'ny 90% amin'ny tranga. Manantena izahay fa afaka nanampy anao hiatrika ity olana ity ianao ary afaka milalao indray ny lalao ankafizinao indrindra.
https://termotools.com mg.termotools.com © Origin 2019